Google | R Blog..!
Archive for the ‘Google’ Category	Google Goes Into Browser War with Chrome!
Just now Google released it’s New Web Browser called “Chrome” .Obviously, it’s in beta. The current version is 0.2.149.27 . Oh btw, it is not joke. It’s neither Google’s or my joke. It’s serious. I’ve been waiting since I read about Chrome on Google’s Blog.
Author: Rapster88	Categories: Google, News	Tags: Chrome, Google Chrome, Google New Browser, Web Browser	Google Talk Current Music Track Bug Workaround Fix
Winamp ကို သုံးပြီး Google Talk မှာ “Show current music track” လို့ ရွေးလိုက်ရင် တစ်ချို့စက်တွေမှာ Google Talk က Crash ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အထင်တော့ WinAMP version အမြင့်ကြောင့် ဖြစ်တာထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ iTunes, Windows Media Player တွေနဲ့သုံးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သိပ်မကြာသေးခင်က ကျွန်တော် Windows Vista ပြန်တင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီ error က အမြဲဖြစ်ပါတယ်။ အစကတော့ Vista ကြောင့်လို့ ထင်ပေမယ့် XP ပေါ်မှာလဲ ဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ လျှောက်ရှာကြည့်တော့ Fix လုပ်တဲ့နည်းကို တွေ့ပါတယ်။
Author: Rapster88	Categories: Google Talk, Tips Tricks and Tweaks	Tags: Fix, Google Talk, Winamp	Gmail Version အသစ်ထွက်နေပြီ!!
Author: Rapster88	Categories: Google, News, Reviews	Tags: Bigger Gmail Storage!!
October 23 ရက်ရောက်ရင် ကျွန်တော် တို့ရဲ့ Gmail Storage ကို 4Gb (4231 MB) အထိတိုးမြှင့်ပေးပါမယ်။ January 4, 2007 ရောက်ရင်တော့ တစ်နေ့ကို 3.3 MB နှုန်း (လက်ရှိ rate ရဲ့ 10 ဆ) နဲ့တိုးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် 2008 ရောက်တဲ့အခါ Gmail Storage က6Gb ကို ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိက 3GB (3246Mb) ပါ။ ဒါကိုမှ မလုံလောက်သေးဘူးဆိုတဲ့ user တွေအတွက်ကတော့ ဒီမှာ ထပ်ပြီး storage ကို ပိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဈေးနှ်ုးတွေကတော့ 10 GB for $20/year, 40 GB for $75/year, 150 GB for $250/year and 400 GB for $500/year ပါ။ ပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့ လူတွေအတွက်ကတော့ အခုပေးထားတဲ့ storage အတွက်လုံလောက် နေပါပြီ။
ဒါက လက်ရှိ ကျွန်တော့် account ရဲ့ usage ပါ။ ဒီ account ကို သုံးနေတာ ၂ နှစ်ရှိပါပြီ။
Author: Rapster88	Categories: Google, News	Tags: ကိုးနှစ်ပြည့်တဲ့ Google
အင်တာနက်သုံးသူတိုင်း ပထမဦးဆုံးဖွင့်တဲ့ Page, Browser တိုင်း နီးပါးရဲ့ Default Homepage တစ်ခုခုရှာလိုသူတိုင်းရဲ့ အစွမ်း ထက် Search Engine ၊ အလွန်လျှင်မြန်တဲ့ Gmail ရဲ့ ဖခင် ၊ ရှင်း လင်းရိုး သားပြီး ကြော်ညာလုံးဝ မပါတဲ့ Google Talk ကိုတီထွင်တဲ့ Googleဟာ သက်တမ်း ၉ နှစ်ကိုပြည့်ခဲ့ ပါပြီ။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ လ မှ စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး တည်ထောင်ခဲ့သူ၂ ဦးက တော့ တကယ့် အင်တာ နက် ဆရာကြီးများဖြစ်တဲ့ Larry Page နဲ့ Sergey Brin တို့ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ Google Domain ကို စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ စပြီးဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ Google လို့ အမည်မတွင် ခင် အရင်နာမည်က “BackRub”ပါ။ ဒီလိုနဲ့ တဖြည်း ဖြည်း နှစ်တွေကြာ တိုးတက်လာပြီး အခုဆိုရင်တော့ အင်တာနက်သုံး သူတိုင်း သိတဲ့ Google အဖြစ်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ နောက်လဲ အမြဲကို တိုးတက်အောင်မြင်နေမယ့် Happy Birthday Google!!!
- Google ရဲ့ 1998 က မြင်ကွင်း- More about Google on Wiki- More about Google on Google
Author: Rapster88	Categories: Google, News	Tags: Gmail 2.0 ??
Google System ဆိုတဲ့ Google Products တွေ အကြောင်းကို အမြဲစောင့်ကြည့် နေတဲ့ Blog ရဲ့ ရေးသားချက်အရ Gmail က Version အသစ် 2.0 ကို ထုတ်တော့မှာလား ဆိုတာပါ။ 2.0 မှာ ဘာတွေ အသစ် ပါနိုင်လဲ ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးပေမယ့် ဖြစ်နိုင်တာက New Interface (Design အသစ်) နဲ့ Offline feature ဖြစ်ဖို့များ ပါတယ်။ Offline feature ဆိုတာ Google ရဲ့ Technology အသစ် ဖြစ်ပြီး Google ရဲ့ Offline Technology နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ web applications (website) တွေကို internet connection မရှိပဲနဲ့ offline မှာ အလုပ်လုပ် နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ Technology ပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ အဲဒီ Offline Technology ကို အသုံးချထားတာက Google Reader ပါ။ RSS Feeds တွေကို offline ထဲမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Offline Technology ကိုရှင်းတာနဲ့ လမ်းကြောင်း လွဲသွားတယ်။ Gmail 2.0 မှာ Offline ကို ဘယ်လို အသုံးချနိုင်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Inbox ထဲက နောက်ပြီး Chat history ထဲက စာတွေ Contact book ထဲက contact’s mail address တွေကို အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် ရှိစရာ မလိုပဲ offline မှာ ကြည့်နိုင်မှာပါ။ Email တွေကိုလဲ ရိုက်ထားနိုင်ပြီး Online ပြန်ရောက်ရင် ပို့လိုက်ရုံပါပဲ။
နောက်ထပ် feature အသစ်တွေ လဲထပ်ပါ နိုင်မှာပါ။ Google ရဲ့အကြောင်းကိုလဲ သိကြတယ်မှလား Author: Rapster88	Categories: Google	Tags: RSS feed
Posting tweet...Powered by Twitter ToolsSponsors	Spam Blocked	17,665 spam comments blocked byAkismet